Nrụpụta obere olu | Mmepụta Volume dị ala - Mepụta - Protoproto Tech Co., Ltd.
Ngwa / Nwepụta Mpịakọta Dị ala
Enwere ike ịmepụta obere oge na obere olu site na usoro nrụpụta dị iche iche. Ọ na-ejide n'aka na ị ga - esi na prototype gaa na nrụpụta enweghị nsogbu.
Createproto bụ onye nrụpụta obere olu na-emetụta ọkwa dị iche iche na-enweghị atụ iji nyefee ogo yana ikwughachi n'akụkụ ọ bụla. Anyị na-ekpebi ụzọ kachasị mma ị ga-aga n'ọma ahịa dabere na ebumnuche na atụmanya nke ọrụ gị, na-enye ndụmọdụ na-efu ma na-echekwa echiche site na atụmatụ, akụrụngwa, usoro mmepụta, nrụpụta, wdg.
Irè na oru oma Low-Volume Production
Nhazi nke Obere Mpempe Akwụkwọ bụ ofzọ Ọdịnihu
Taa, enwere atụmanya ndị ọzọ maka ịhazi na iche iche site na ndị na-azụ ahịa karịa ka ọ dịbu. Dika ndu ndu gi na-ebelata ma na-ebuputa ihe ohuru ohuru, ihe mgbanwe ohuru na oge ahia di oke nkpa. Ndị a na-akwalite, imepụta ngwaahịa na-amalite ngwa ngwa na ndị mmepe ngwaahịa na-atụgharị uche ha site na imepụta oke ihe na nrụpụta obere.
Dabere na usoro nhazi, usoro mmepụta ihe, ịkpụzi ngwa ọrụ na ihe eji eme ihe, nrụpụta obere olu n'ozuzu ya gụnyere usoro mmepụta nke akụkụ 100 ruo 100K. N'iji ya tụnyere ọtụtụ ihe ize ndụ na ụgwọ ndị metụtara ịba ụba ngwa ngwa na "ịba ụba ahịa", omume nke imepụta obere olu na-ebelata ihe ize ndụ, na-eme ka imepụta ihe na-agbanwe, na-ebelata oge-na-ahịa, na -emepụta ohere iji chekwaa ụgwọ mmepụta. Ihe ngwọta dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ nke dị ala na-eme ka ndị niile metụtara ya rite uru na ndụ ndụ ngwaahịa, site na imepụta iji rụpụta yana ụzọ niile na-eweta ngwaahịa na ndị ahịa. Kpọtụrụ onye njikwa ọrụ anyị taa ka ịmalite ọrụ gị site na iji ọnụego akwụ ụgwọ.
Uru nke imepụta obere mpịakọta
● Design iterations na-agbanwe agbanwe
Mepụta obere ngwaahịa na-agba ọsọ na-eme ka ọ dị mfe iji gosipụta imepụta, injinia, na nrụpụta tupu ị tinye ego na ngwa ọrụ dị oke ọnụ ma tinye ha na mmepụta ihe. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe mbu nke mbu gha nwere ike meziwanye ma me ka ihe di nma karie ihu ndi ozo.
● Short mgbanwe mgbe obere ego
Dika ugwo nke ihe oru na nhazi di ihe di nkpa nke mmefu ego a, usoro imeputa olu di obere karie ihe kariri ihe eji emeputa site na ngwa ngwa na ulo na obere oge, ya mere o na-ebelata onu ahia nke mmeputa. .
Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-ebutekarị ihe kachasị mkpa iji dozie nrụpụta nrụpụta dị arọ ha ma kpuchie ụgwọ ha. Otú ọ dị, ndị na-emepụta obere olu ga-enyere gị aka iji ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe. Ọ bara uru karịsịa maka mmalite nke obere na obere ụlọ ọrụ dị n'etiti.
● Mee ka ọdịiche ahụ pụta ìhè
Mịpụta ọtụtụ narị puku ihe eji arụpụta ọrụ nwere ike ịbụ ezigbo aka tupu ị banye na mmepụta ihe. Onye na-anya ya ga - enwe ike idozi oghere dị n’agbata prototype na mmepụta, nweta ọrụ gị, ụdị ule dabara adaba na inyocha injinia ka emere ngwa ngwa, nye gị ohere igosi ndị ahịa na ndị na - ere ahịa ngwa ahịa zuru oke, wee mee ka esemokwu ọ bụla chọpụta gbaziri nke ọma tupu ha ebutefee n'ichepụta ihe.
Time Oge dị mkpirikpi ịga ahịa
Na asọmpi na-arịwanye elu na ahịa ngwaahịa, ịghọ ụlọ ọrụ mbụ nwere ngwaahịa pụrụ iche iji kwalite ahịa nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti ihe ịga nke ọma na ọdịda. Ngwakọta nke asọmpi na asọmpi na-enweghị atụ emeela ka ndị mmepe na injinia imepụta ihu nrụgide na-arị elu iji mepụta ngwaahịa dị elu ma ọ dịkarịa ala oge ọ ga-ekwe omume. Ebe ọ bụ na mmepụta na ọkọnọ yinye nkwado na-kachasị maka obere-olu ngwaahịa, n'ichepụta nwere ike hụ na feasibility nke oru ngo, na-eme ka gị na ngwaahịa na-aga ahịa ngwa ngwa na ihe oké ọnụ price.
Ngwa nke Nwepụta Mpịakọta Dị ala
Ihe ngosi ọrụ nke kwekọrọ na ngwaahịa ikpeazụ
Production-ọkwa injinia prototypes
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ mmepụta mmiri
Ihe eji emeputa ihe maka ule nyocha (EVT, DVT, PVT)
Omenala mpempe akwụkwọ CNC nke nwere obere olu
Plastic injection kpụrụ akụkụ maka pilot agba
Ngwunye mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị ala
Elu-edu ahaziri ngwaahịa
Obere ọsọ nke mmepụta akụkụ
Mee CreateProto na-edozi ihe niile ị chọrọ
N'ebe a kapịrị ọnụ nke imepụta olu dị ala, CNC machining na-arụ ọrụ dị mkpa n'ichepụta ọdịnala maka akụkụ igwe na plastik. Nlụpụta na obere mpịakọta na CNC machining bụkwa otu ezigbo nyocha nyocha maka ọbịbịa mmepụta usoro.
Dị ka ọkachamara na-emepụta na CNC machining, CreateProto ejiriwo ndị ahịa si ụlọ ọrụ dịgasị iche iche rụọ ọrụ site n'ichepụta ihe ndị dị elu, nke ziri ezi na akụkụ dị mgbagwoju anya. Ngwakọta nke akụrụngwa kachasị elu na ahụmịhe na-enweghị atụ na ahụmịhe nke ndị otu anyị na-enye anyị nnukwu ọnụ maka mkpụmkpụ mmepụta obere na inyere ndị ahịa aka ịghọta imewe mgbanwe site na usoro ngwa ngwa ngwa ngwa.
Anyị na-enye ụlọ ahịa otu nkwụsị maka ọrụ mkpụmkpụ nke obere ọrụ gị na China. Ma ị chọrọ plastik mmepụta, ọkwa dị iche iche, ma ọ bụ akụkụ aluminium eji arụ ọrụ, CreateProto nwere ikike ijikwa ngwakọta ngwakọta na ngwugwu ọ bụla maka gị.
Efu-Ọma Ibu Rapid Ọgwụ na ịkpụzi
Otutu injection ịkpụzi na-enye a mma nhọrọ maka ndị ahịa mkpa ala olu kpụrụ akụkụ. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị imepụta ọtụtụ narị narị akụkụ nke mmepụta-ọkwa plastik maka nyocha nyocha dị nso na ngwaahịa ikpeazụ, mana nyekwa ihe achọrọ maka akụkụ njedebe iji mepụta obere olu.
Na CreateProto, anyị nwere ọpụrụiche na ebu ngwa ngwa nke ma aluminom na nchara na obere olu ịkpụzi plastik, ma na-agbagharị n'akụkụ gị na usoro ihe omume nke na-akwado nyocha gị na nhazi oge. Anyị na-agwakọta usoro ịkpụzi ngwa ngwa ọdịnala na ngwa ngwa ngwa ngwa iji nye ndụmọdụ bara uru site na aghụghọ, akụrụngwa, usoro mmepụta, imepụta ihe, wdg.
N'otu oge, mgbe imewe ahụ kwụsiri ike ma ọ bụ mpịakọta na-eto eto, CreateProto ga-agagharị na mmepụta ebu maka uru gị. Mgbanwe dị iche iche maka plastik omenala pụtara na ị na-arụ ọrụ na otu isi mmalite maka ihe niile site na prototype na mmepụta maka nnyefe.
Omenala Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ
Mpempe akwụkwọ ntanye mpempe akwụkwọ bụ usoro ịkpụzi akụkụ site na mpempe ígwè site na ịcha, ọkpọ ọkpọ, zọọ, ekwe na imecha. E jiri ya tụnyere ọnụego ntọala dị elu na oge okirikiri nke imepụta nnukwu olu, ịkpụpụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị ala ga-ebelata ntọala oge ka ọrụ wee gbanwee ngwa ngwa.
Ọrụ ndị na-emepụta mpempe akwụkwọ na-emepụta CustomProto na-enye azịza dị oke ọnụ ma na-achọ maka mkpa nrụpụta gị. Site na otu prototypes gaa na obere olu mmepụta, anyị na-enye ọtụtụ ụzọ nrụpụta, ihe onwunwe, na ịmecha nhọrọ. Ikike anyị gụnyere ịkpụpụta akụkụ sitere na igwe anaghị agba nchara, aluminom, igwe, ọla kọpa, ọla kọpa, galvanized na ndị ọzọ, yana ịme ihe ogwe ngwaọrụ, okpokolo agba, okwu ikpe, chassis, brackets, na ihe ndị ọzọ na-abanye na nnukwu nzukọ.
Anyị na-etu ọnụ mgbe niile na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa anyị na teknụzụ na nkwado dịwanye elu, ma soro ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ nke ọma iji nye ọrụ kachasị dị ala nke nrụpụta obere ọrụ.
Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Fast Prototyping, Otito Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Prototyping,